UDS Enterprise: yakavhurika-sosi yekubatanidza broker | Linux Vakapindwa muropa
UDS Enterprise: yakavhurika-sosi yekubatanidza broker
Kune avo vasingazive kuti chii icho yekubatanidza broker, kutaura kuti isoftware inoshandiswa zvakanyanya muiyo desktop virtualization (VDI), yakakosha kumakambani anhasi. Nayo iwe unokwanisa kuendesa uye kubata chaiwo madhaputa, asi zvakare icharerutsa epakati hutongi uye manejimendi ye kushandisa virtualization (vApp), virtualized apps, telephony / IP kamera, uye zvimwe zvakagoverwa zviwanikwa.
Nhasi tinopa chirongwa chakagadzirwa nekambani inonakidza yeSpain, iri yekubatanidza broker inozivikanwa se UDS Enterprise. Iyi purojekiti inogona kumhanyisa muchinjika-chikuva, uye icho zvakare chinosanganisira kugoverwa kweGNU / Linux, kuti tikwanise kuishandisa kubva kune yatinoda sisitimu yekushandisa. Uye zvakare, iri rakavhurika sosi purojekiti, ine zvazvinoreva izvi, uye inovimbisa dhizaini inopa kureruka, kumhanyisa, chengetedzo, uye mashandiro kuitira kuti iwe unongofanirwa kunetseka nezve manejimendi uye kutumirwa kwematafura ari kure nemaapplication. Kuva pachena-mabviroIyo inoshanduka-shanduka bhuroka, sezvo iri 100% inogadzirika kune kuravira uye zvinodiwa nemushandisi kana kambani inoishandisa. Uye zvakare, iwe unogona kuiwana kuburikidza neyekunyorera system, saka haufanire kubhadhara marezinesi anodhura ayo aya marudzi ezvigadzirwa anowanzovakirwa. Pano iwe unogona kubhadhara zvikamu zvevashandisi vanofanirwa kuishandisa, uye panguva yakabhadharwa nguva, iwe unowana zvigadziriso zveiyi software uye technical technical.
Asi kana izvo zvaunoda kuve nechigadzirwa dzakasununguka zvachoseIniwo ndinofanira kukuudza kuti pane yakasununguka vhezheni vhezheni, kunyangwe iwe usingawane chero chero rutsigiro, asi zvinoshanda. Pamusoro pezvo, pane mamwe maedzo ekuedza aunogona kushandisa nekumwe kusakwana, asi izvo zvinogona kukutungamira nekugadzirisa kusahadzika Chero ipi vhezheni ye software iyi yauri kutsvaga, unogona kuiwana kubva pano. Ichokwadi ndechekuti inonakidza kwazvo, uye zvakare ibudiriro yenyika ... Ndinovimba unoifarira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » UDS Enterprise: yakavhurika-sosi yekubatanidza broker
Windscape - Yekutsvaga Vhidhiyo Mutambo Ine Rinoburitsa Zuva